Steelseries QCK Prism Gaming Mouse Pad (Black)-1 ~ ICT.com.mm
HomeSteelseries QCK Prism Gaming Mouse Pad (Black)-1
Steelseries QCK Prism Gaming Mouse Pad (Black)-1
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Surface Side 1-Cloth, Surface Side 2- Hard Polymer(Plastic),Base Material -Sillicon Rubber, Weight-2Lbs, Width-292.44mm/11.5 inches, Height 356.7mm/14 inches, Depth 8.7. Steelseries ရဲ့ QCK Prism Gaming Mouse Pad က ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး RGB... [Learn more]
Surface Side 1-Cloth, Surface Side 2- Hard Polymer(Plastic),Base Material -Sillicon Rubber, Weight-2Lbs, Width-292.44mm/11.5 inches, Height 356.7mm/14 inches, Depth 8.7.
Steelseries ရဲ့ QCK Prism Gaming Mouse Pad က ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး RGB Light ပါဝင်ပြီး Gamers တွေကို မတူညီတဲ့ Mouse Pad မျက်နှာပြင်နှစ်ခုထဲက နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ Gaming Mouse Pad ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမမျက်နှာပြင်က အနုစိတ်ချောမွတ်တဲ့ Micro-textured Cloth Surface ဖြစ်ပြီး ဒုတိယမျက်နှာပြင်ကတော့ မာကျောတဲ့ ပရီမီယမ် ပိုလီမာ(ပလတ်စတစ်) မျက်နှာပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ RGB မီးရောင်က ဂိမ်းကစားနေချိန်အရောင်ပြောင်းလဲတဲ့ GameSense Lightning ကို Support ပေးထားပါတယ်။ အောက်ခြေမှာတော့ လုံးဝမချော်ထွက်နိုင်အောင် ကုပ်တွက်ထားနိုင်တဲ့ရော်ဘာအောက်ခံပြား ပါဝင်ပါတယ်။ အရွယ်အစားကတော့ 14.04” x 11.51” ရှိမှာဖြစ်ပြီးအထူကတော့ 0.34” ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အာမခံတစ်နှစ် ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။